သူမရဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာကို ပိုကြီးလာအောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဖွင့်ပြော လိုက် တဲ့ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင် – Shwe Ba
Homepage / Celebrity / သူမရဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာကို ပိုကြီးလာအောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဖွင့်ပြော လိုက် တဲ့ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင်
By Shwe BaPosted on December 3, 2020 December 3, 2020
အခု နောက် ပိုင်းမှာ လူမှု ကွန်ယက် တွေမှာ ချဲလန့် တွေ ခေါ်ရင်းနဲ့ နာမည် ကြီး လာ တဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင် ဟာဆိုရင် ပုရိသတွေ ရဲ့ အသည်း စွဲအနု ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ် သလို မိန်းကလေးချင်း တောင် အားကျ ရတဲ့မော်ဒယ် မ လေးလည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဖူးပွင့်ခိုင်က မကြာသေးမီ က အကုန်သိ သတင်းဌာန နဲ့ အင်တာဗျူး မှာ ကိတ် အောင် တင်သား က အသား ကို ရင်သား ထဲထည့်ထား တဲ့အေ ကြာင်း နဲ့ အနုပညာ လှုပ် ရှားမှုလေးတွေ အကြောင်း ကို ပြောပြသွားပါတယ် ။
ဖူးပွင့်ခိုင် က ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် လောက ထဲ ဝင်ရောက် လာဖြစ်ပုံ ကို “ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် လုပ်တာ က တော့ အရင် က ညီမက ဓာတ် ပုံရိုက် တာ ။ သူ များ တွေက ညီမ ရဲ့မြက်နှာ နဲ့ ညီမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဆိုကြိုက် တယ် ဆိုပြီး လာငှား ကြတာ ။ ထိုင်း မှာ က ဆက်ဆီေ မ်ာဒယ်လ် တွေအများကြီး ရှိ တယ် ။ ကိုယ့်ထက် ချော တဲ့ သူတွေသာ တဲ့ သူတွေ ၊ခွဲစိတ်ထားတာတွေ၊ ညီမလို ပုံစံမြိုး နဲ့ဖြစ်နိုင်တ ယ်ဆို ပြီး လာငွားတာ။ ကိုယ့်ထက်သုံး ဆေလာက်ယူ တဲ့အခြိန်မွာ ညီမက နွစ်ဆေလာ က် ပဲယူတယ်။ အဲ့တော့ ညီမကို လာငွားကြတယ်။ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် က 2016 လော က်ကတ ည်းကလုပ်တာ။ ဒါပေမယ့် ညီမက တင်လည်းမတ င်ဘူး။ ရွက်လို့”လို့ဖြေကြား ထားပါတယ်။ ဆက်ဆီ မော် ဒယ်လုပ်တဲ့ အေပ်ါမိသား စုရဲ့ သေဘာထားကိုလ ည်း ဖူးပွင့်ခိုင်က “အရင်တုန်းက အမေက မလုပ်ပါနဲ့သ မီးရယ် မြက်နွာပူစရာ ကြီးရွ က်စရာကြီးဆိုပြီြးေ ပာတယ်။ အခုတော့ လက်ခံတယ်။ ပိုက်ဆံရွာ တာလေ။ ရိုး ရိုးသားသား ပိုက်ဆံရွာတာ။ သျူမားဆီက ကလိမ် ကကျစ်ကြ ပြီးရယူထား တဲ့ပိုက်ဆံ လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုပဲအလုပေ် တွနဲ့ပိုက်ဆံ ရွာတယ်။ အေဖ့ကိုလည်းေ ထာက်ပံ့တယ်။ အေမ့ကိုလည်း ထောက် ပံ့တယ် ” လို ပြောပြထား ပါ တယ် ။
ဖူးပွင့်ခိုင် က တင်ပါးက အ သားကိုရင်သားထဲ ထည့်ထား တာ ပဲရွိပြီး ခြား ခွဲစိတ်ထား တာ မရှိ ကြော င်းကိုလည်း “မရှိ ဘူး။ နှာ ခေါင်းက လည်း အ မေ ပေးထား တာပဲ ။ အကုန်လုံးက အ မေ ပေးထားတာ တွေချည်း ပဲ။ အချို့ ကလည်း ရင်သားကြီး လာတယ် ပေါ့ ပြောကြ တယ်။ အမှန်တော့ Gym ဆော့တယ်။ Gym အရမ်းဆော့ တယ် ။ ညီမက အမွန် အတိုင်း ပြောရရင် တင်တွေ ဘာတွေရှိ တော့ တင်ရဲ့အသား ကိုရင် သားထဲထ ည့် လိုက်တာ။ သိတယ် မ လား ဆီလီကွန် မဟုတ် ဘူး ။ ကိုယ့်အသား ကိုပဲပြန် ထည့်တာ ။ ခွဲစိတ် ထားတာ ဆီလီကွန် ထည့် တာတော့မရှိ ဘူး ။ ကြော က်လည်း ကြောက်တယ်”လို့ ပြောထား ပါတယ် လက်ရှိ အနု ပညာ လှုပ်ရွား မှုတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးေ တာ့ ဖူးပွင့်ခိုင်က “ညီမအခု ရန်ကုန်ကို အလည် လာတာ ဆိုပေမယ့် ဓာတ်ပုံ ရိုက်တယ်။ video ရိုက်တယ်။ MTV အေသးစားေ လးတွေ ရိုက်တယ်။ ဟာသ လို ပုံစံလေးတွေ ပေါ့။ သိပ်ပြီး အချိန် မရလို့ ဒီမှာဆို ကင်မရာ မန်း မရှိဘူး။ ဟိုမှာ ဆို ညီမေလးေ တွရှိ တ ယ်လေ။ အဲ့လို မျိုး ပေါ့ ။ ဒီမှာ ကြ ကိုယ့် ဟာကိုယ် ဖုန်း ကို ထောင်ပြီး ရိုက် လည်း ကင်မရာ က လွဲလွဲ သွားေ တာ့လေ။ သိပ်ပြီး အဆင်မ ပြေဘူး”လို့ ပြောပြ ထား ပါ တယ် ။
source : Phoo Pwint Khing
အခု နောကျ ပိုငျးမှာ လူမှု ကှနျယကျ တှမှော ခြဲလနျ့ တှေ ချေါရငျးနဲ့ နာမညျ ကွီး လာ တဲ့ ဆကျဆီ မျောဒယျ ဖူးပှငျ့ခိုငျ ဟာဆိုရငျ ပုရိသတှေ ရဲ့ အသညျး စှဲအနု ပညာရှငျ တဈဦးဖွဈ သလို မိနျးကလေးခငျြး တောငျ အားကြ ရတဲ့မျောဒယျ မ လေးလညျး ဖွဈ ပါ တယျ ။ ဖူးပှငျ့ခိုငျက မကွာသေးမီ က အကုနျသိ သတငျးဌာန နဲ့ အငျတာဗြူး မှာ ကိတျ အောငျ တငျသား က အသား ကို ရငျသား ထဲထညျ့ထား တဲ့အေ ကွာငျး နဲ့ အနုပညာ လှုပျ ရှားမှုလေးတှေ အကွောငျး ကို ပွောပွသှားပါတယျ ။
ဖူးပှငျ့ခိုငျ က ဆကျဆီ မျောဒယျလျ လောက ထဲ ဝငျရောကျ လာဖွဈပုံ ကို “ ဆကျဆီ မျောဒယျလျ လုပျတာ က တော့ အရငျ က ညီမက ဓာတျ ပုံရိုကျ တာ ။ သူ မြား တှကေ ညီမ ရဲ့မွကျနှာ နဲ့ ညီမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ဆိုကွိုကျ တယျ ဆိုပွီး လာငှား ကွတာ ။ ထိုငျး မှာ က ဆကျဆီေ မျာဒယျလျ တှအေမြားကွီး ရှိ တယျ ။ ကိုယျ့ထကျ ခြော တဲ့ သူတှသော တဲ့ သူတှေ ၊ခှဲစိတျထားတာတှေ၊ ညီမလို ပုံစံမွိုး နဲ့ဖွဈနိုငျတ ယျဆို ပွီး လာငှားတာ။ ကိုယျ့ထကျသုံး ဆလောကျယူ တဲ့အခွိနျမှာ ညီမက နှဈဆလော ကျ ပဲယူတယျ။ အဲ့တော့ ညီမကို လာငှားကွတယျ။ ဆကျဆီ မျောဒယျ က 2016 လော ကျကတ ညျးကလုပျတာ။ ဒါပမေယျ့ ညီမက တငျလညျးမတ ငျဘူး။ ရှကျလို့”လို့ဖွကွေား ထားပါတယျ။ ဆကျဆီ မျော ဒယျလုပျတဲ့ အပျေါမိသား စုရဲ့ သဘောထားကိုလ ညျး ဖူးပှငျ့ခိုငျက “အရငျတုနျးက အမကေ မလုပျပါနဲ့သ မီးရယျ မွကျနှာပူစရာ ကွီးရှ ကျစရာကွီးဆိုပွီွးေ ပာတယျ။ အခုတော့ လကျခံတယျ။ ပိုကျဆံရှာ တာလေ။ ရိုး ရိုးသားသား ပိုကျဆံရှာတာ။ သူမြားဆီက ကလိမျ ကကဈြကွ ပွီးရယူထား တဲ့ပိုကျဆံ လညျးမဟုတျဘူး။ ဒီလိုပဲအလုပျေ တှနဲ့ပိုကျဆံ ရှာတယျ။ အဖေ့ကိုလညျးေ ထာကျပံ့တယျ။ အမေ့ကိုလညျး ထောကျ ပံ့တယျ ” လို ပွောပွထား ပါ တယျ ။
ဖူးပှငျ့ခိုငျ က တငျပါးက အ သားကိုရငျသားထဲ ထညျ့ထား တာ ပဲရှိပွီး ခွား ခှဲစိတျထား တာ မရှိ ကွော ငျးကိုလညျး “မရှိ ဘူး။ နှာ ခေါငျးက လညျး အ မေ ပေးထား တာပဲ ။ အကုနျလုံးက အ မေ ပေးထားတာ တှခေညျြး ပဲ။ အခြို့ ကလညျး ရငျသားကွီး လာတယျ ပေါ့ ပွောကွ တယျ။ အမှနျတော့ Gym ဆော့တယျ။ Gym အရမျးဆော့ တယျ ။ ညီမက အမှနျ အတိုငျး ပွောရရငျ တငျတှေ ဘာတှရှေိ တော့ တငျရဲ့အသား ကိုရငျ သားထဲထ ညျ့ လိုကျတာ။ သိတယျ မ လား ဆီလီကှနျ မဟုတျ ဘူး ။ ကိုယျ့အသား ကိုပဲပွနျ ထညျ့တာ ။ ခှဲစိတျ ထားတာ ဆီလီကှနျ ထညျ့ တာတော့မရှိ ဘူး ။ ကွော ကျလညျး ကွောကျတယျ”လို့ ပွောထား ပါတယျ လကျရှိ အနု ပညာ လှုပျရှား မှုတှေ နဲ့ ပတျသကျပွီးေ တာ့ ဖူးပှငျ့ခိုငျက “ညီမအခု ရနျကုနျကို အလညျ လာတာ ဆိုပမေယျ့ ဓာတျပုံ ရိုကျတယျ။ video ရိုကျတယျ။ MTV အသေးစားေ လးတှေ ရိုကျတယျ။ ဟာသ လို ပုံစံလေးတှေ ပေါ့။ သိပျပွီး အခြိနျ မရလို့ ဒီမှာဆို ကငျမရာ မနျး မရှိဘူး။ ဟိုမှာ ဆို ညီမလေးေ တှရှိ တ ယျလေ။ အဲ့လို မြိုး ပေါ့ ။ ဒီမှာ ကွ ကိုယျ့ ဟာကိုယျ ဖုနျး ကို ထောငျပွီး ရိုကျ လညျး ကငျမရာ က လှဲလှဲ သှားေ တာ့လေ။ သိပျပွီး အဆငျမ ပွဘေူး”လို့ ပွောပွ ထား ပါ တယျ ။
Previous post လှပလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းလေးကို လှုပ်ခါကာ ဆက်ဆီ ကျကျ ကပြ နေတဲ့ ရွှေပိုးအိမ် ရဲ့ VIDEO
Next post အချိန် ခဏလေးအတွင်းမှာ ကြည့်ရှု့သူပေါင်းမ ရေတွက်နိုင်လောက်အောင် များပြားခဲ့တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အလန်းစား TIK TOK ဗီဒီယိုလေး
တဈခါမှ မမွငျဖူးတဲ့ ပုံစံအဆနျးလေးနဲ့ အမိ…
ကွညျ့ရှုသူတိုငျး ရငျသပျရှုမောသှားစမေယျ့ …
ခပျကွမျးကွမျး ကကှကျဆနျးလေး နဲ့ ပရိတျသတျက…
အရမျးကို ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ အမ…
ပုရိသတို့ ရငျခုနျသံတှေ ဗွောငျးဆနျသှားစမေ…
ကွညျ့ရှုသူတိုငျး ကွှသှေားစမေယျ့ အမိုကျစာ…
ရကေူးကနျထဲမှာ ကိတျလှနျးတဲ့ ခန်ဓာ ကိုယျလေ…
ပုရိသတို့ အသဲကို ကွှဆေငျးသှားအောငျ တကယျက…
© 2020. Shwe Ba. Power by Cele Journal